Apple fritters - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Tsy miomana betsaka aho matetika koba endasina ao an-trano, na dia tsy nipoitra mihitsy aza aho a sofina, frixuelos na toast frantsay. Fa manao ahoana isika fahadisoan'ny ary fetin'ny ray koa izao, ny zavatra rehetra dia avela hatramin'ny volomason'ny fritters.
Ny fritters an'ny Apple Tsy izy ireo no malaza indrindra satria ny voatavo no be indrindra, fa afaka manome toky anao aho fa tena tsara ny vokatra satria malefaka sy malefaka ny paoma. Tena manankarena!
Natahotra kely azy ireo aho, satria araka ny nolazaiko dia tsy manomana azy ireo matetika aho, fa ny fomba fahandro kosa mora atao ary mazava ho azy tena mora. Tsy mety amin'ny olona manao sakafo izany.
Dika matsiro, matsiro ary tany am-boalohany vita amin'ny paoma.
Fotoana fiomanana: 25M
Fotoana manontolo: 28M
125 g an'ny cider
Vovo-mofo 10 g
Paoma volamena 1
Siramamy 1 sotro fihinana ho an'ny paoma
Sugar ho an'ny vovoka
Apetraho ao anaty vera ny lolo. Manasaraka ny fotsy amin'ny yolk. Beat ny fotsy amin'ny sira kely nify 2 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 3 ½. Esory ny fotsy nitaingina hatramin'ny lanezy sy ny tahiry.
Raha tsy manasa ny vera dia ampio ny lafarinina, ny volon'ondry, ny masirasira, ny siramamy ary ny cider. Beat for 1 minitra amin'ny hafainganana 3.
Ampidiro ao anaty koba lafarinina miaraka amina hetsika malefaka ny atody nokapohina mandra-pahatonga azy ho tsara nefa tsy tafahoatra loatra. Avelao hisarona takelaka na fonosana plastika ny hijoro.
Mandritra izany fotoana izany, peel ny paoma, esory ny fotony ary atsaharo ho lasa silaka manify. Nozaraiko ho efamira ilay izy satria toy izany ny fritters dia antonony ny habeny. Apetraho eo ambony lovia ny paoma ary atondraho siramamy kely eo amboniny.
Afanaina menaka betsaka amin'ny hafanana antonony. Napetrako ho 7 amin'ny hobin'ny seramika avy amiko 0 ka hatramin'ny 9.
Atsofohy ao anaty paty ireo sombin-paoma ary endaso mandra-pahazavana volontany. Manoro hevitra anao aho mba hanao izany amin'ny andiany 2 na 3 isaky ny 3 satria endasina haingana be izy ireo ary raha ampiana bebe kokoa isika dia tsy manam-potoana hamadihana azy ireo ary ho be volontany loatra izy ireo.
Esory ary esory amin'ny taratasy lakozia mihosotra. Mamafaza siramamy eo amboniny. Ary aroso miaraka amin'ny sôkôla tsara.
Fanazavana fanampiny - Fritters
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Latsaky ny adiny 1, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Apple Fritters
Salama Mayra, tsy manana cider aho, azoko esorina ve sa azoko soloina zavatra hafa? Misaotra anao. Toa tsara ny fomba fahandro, te hihinana ummmm iray aho
Mamaly an'i toñi
Azo soloina labiera na soda. Na dia tsy mitovy aza ny tsiro dia mitovy ny vokany.
elo dia hoy izy:
Ary raha potehintsika ny paoma, dia hanao ahoana izy ireo? Tsy tiako ny paoma toy izany, ary mieritreritra aho fa tsy hihinana azy koa ny zanako.
Valio ny ELO
Tsy ataoko mihitsy araka ny nolazainao ireo fa toa hevitra tsara. Ny heveriko fa tsy maintsy dinihinao dia ilay ranom-boankazo izay havoakan'ny paoma. Apetrako ao anaty saringan ny puree ary avelako hiala izy mba hamoaka ranoka betsaka araka izay tratra.
Manantena aho fa hiteny ahy ianao !!
HILARIO MIRANDA dia hoy izy:
REHETRA MANKASITRAKA MISAOTRA MAYRA
Valiny amin'i HILARIO MIRANDA
Misaotra Hilario !!
Faly aho fa tianao izany.
Torkia voatoto miaraka amin'ny legioma sy prun
Lasopy trondro tena mora